Rumor wabafi, inoveli eyothusayo ngu-Enrique Laso | Uncwadi lwangoku
Namhlanje e-Actualidad Literatura sibonisa uphononongo lwenye yeencwadi ezigqwesileyo ezibhalwe ngu-Enrique Laso, "Amarhe abafileyo." Incwadana yamabali yesayensi apho uLaso akwaziyo ukusuka kwiphepha lokuqala ukuya kwelokugqibela.
Nawuphi na umthandi wentsomi uya kuva ngeNecronomicon, incwadi eyenziwe nguLovecraft, okanye mhlawumbi yayingeyonto elula?
USebastián Madrigal yintatheli okwelona nqanaba lisezantsi lomsebenzi wakhe wobungcali. Amatyala amcinezela ngakumbi nangakumbi kwaye uqala ukoyikisela ikamva lakhe lezemali.
Emva kwenqaku malunga neNecronomicon eyapapashwa yintatheli ngaphandle kononophelo oluninzi, usozigidi waqhagamshelana naye ukuba amnike umsebenzi, isixa esikhulu semali ukuze atshintshe ikopi yoqobo.
UMadrigal, nangona inqaku lakhe lingazi nto ngale ncwadi, uyavuma ukuthengiselana. Ngoncedo lomhlobo wakhe uCarlos kunye no-Claudia oyindumasi, uya kuqalisa i-adventure eneempembelelo ezibalulekileyo.
Nangona ibali lencwadi lingenanto yakwenza nalo, ngokuqinisekileyo lisikhumbuza ngandlela thile ngencwadi edumileyo "El club Dumas", nguArturo Pérez-Reverte omkhulu; Incwadi eyayiziswe kwiscreen esikhulu esinegama "iSango leThoba" elikhokelwa nguRoman Polanski.
Njengokuba besiphawulile, inoveli ineebrashi ezithi zifane nebali likaPérez-Reverte, nangona uLaso enendlela yakhe kwaye njengoko ibali liqhubeka silibale ukufana kwala mabali mabini.
"Rumor of the dead" yinoveli emnandi, ingxubevange yamaphupha kunye namayelenqe. Abalinganiswa benziwe kakuhle. Nokuba ezilungileyo azintle kangako, kwaye akukho zimbi ezimbi. Zonke zinembali yazo kwaye zinxibelelene kakuhle. Ngamaxesha amaninzi kuyenzeka ukuba, kwinoveli kukho abalinganiswa abaseleyo, akunjalo.
Elinye inqaku elincamisayo lutshintsho kwixesha lokubaliswa kwebali. Kuqala kunokuba nokudideka, kodwa ngokwenene yinto ekwaziyo ukubangela umdla ngakumbi kumfundi.
Incwadi ekucetyiswa kakhulu, ekhawulezayo ukuyifunda (kuba awuyi kufuna ukuyibeka phantsi) kunye nesiphelo esifanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Rumor wabafi, inoveli eyothusayo ngu-Enrique Laso